Lohahevitra: Amin'ny varotra an-tserasera any Amazon
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-11-14
Lohahevitra: Amidin'ny varotra an-tserasera ao amin'ny Amazon Ningbo Yongsheng Brush Co., Ltd.-iray amin'ireo orinasa mpanamboatra volo volo matihanina ao Shina. Amazon-iray amin'ireo mpivarotra antsinjarany lehibe indrindra eto an-tany. Hatramin'ny taona 2018, ny orinasanay dia nanao varotra e-varotra amorontsiraka Amazon ary nampiasa forei manokana ...
Lohahevitra: borosy fibre vita amin'ny vita amin'ny volotsangana / borosy ahitra
Lohahevitra: borosy fibre vita amin'ny volotsangana vaovao / borosy ahitra tsy misy plastika, tsy misy hazo, tsy misy vy. Ningbo Yongsheng Brush Co., Ltd. dia nahavita nanamboatra fitaovana vaovao - fitaovana biomass composite. Izy io dia karazana fitaovana fanoherana vaovao izay misy akora macromolecular sy biomass materia ...
Lohahevitra: Manakaiky ny faharanitan-tsaina (AI)
Lohahevitra: Manakaiky ny Artificielle artificielle (AI) ENY, efa manakaiky ny AI! Noho ny fahasarotana amin'ny fampidirana mpiasa, indrindra ny fiantraikan'ny valanaretina tamin'ny taona 2020.Ningbo Yongsheng Brush Co., Ltd. dia nanao ezaka lehibe hampiroborobo ny teknolojia AI ho famokarana betsaka. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny inje ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-10
Raha te-hanatsara ny fomba fanaovanay volo miaraka amin'ny harena hita any an-dakozia toy ny fork (Miala tsiny, Ariel), ny fiantsenana ny borosy volo tsara indrindra mifanaraka amin'ny karazana volonao, ny volonao, ny halavanao ary ny safidinao dia tsy dia sarotra. Ny borosy ampiasanao hialana amin'ny snarls na hizara con ...
Ny borosy volo tsara indrindra amin'ny fanahaingoana ny manaonao
Mila borosy volo tsara ny tsirairay. Na ny famoahana knot na famoahana endrika hafa fotsiny ny volonao dia fitaovana marobe ilaina amin'ny fijerena ny tsara indrindra izany. Mazava ho azy, raha mitady havaozina vaovao ianao, dia ho azonao antoka fa hahazo iray vita vita tsara ianao ary ...
Ireto hacks volo manam-pahaizana 6 ireto dia * hanampy eo noho eo * ny volonao sy ny hateviny amin'ny volonao
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-10
Na mitady haka tahaka ny bouffant sixties ianao dia amp ampidiro amin'ny fanavaozana mahazatra na mamorona hetsika mikorontana fotsiny mandritra ny halavany, ny volon-doha dia tsy miala amin'ny fombany mihitsy. Fa raha teraka tamin'ny volo tsara ianao, na nihalava ny volonao nandritra ny taona maro, nahatratra ny volony ...